Maraykanka Oo Cunaqabatayn Ku Soo Rogay Taliye Sare Oo Ka Tirsan Ciidammada Dalka Eritrea – somalilandtoday.com
Maraykanka Oo Cunaqabatayn Ku Soo Rogay Taliye Sare Oo Ka Tirsan Ciidammada Dalka Eritrea
War-bixin Ka Digtay In Dawladda Shiinuhu Soomaaliya Ku Qasabto Inay Qaaddo Tallaabo Lid Ku Ah Somaliland, Si Loo Carqaladeeyo Xidhiidhka Taiwan
Wiil Soomaali Oo Loo Doortay Golaha Deegaanka Magaalada Torino
Agaasimihii Komishanka Doorashooyinka U Qaabilsanaa Diiwaan gelinta Codbixiyeyaasha Oo Xalay Ku Dhex Geeriyooday Masaajid Yaalla Hargeysa Isaga Oo Salaad Ku Jira
Xasan Gaafaadh Oo Markii Ugu Horraysay Shaaciyay In Uu U Sharraxan Yahay Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE, Meeshana Ka Saaray Wararka Sheegaya In Uu Tanaasulay.
(SLT-Eritrea)-Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in uu cunaqabateyn ku soo rogay hoggaamiye sare oo ka tirsan millatariga Eritrea kadib markii uu ku kacay xadgudubyo ba’an oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha intii uu socday dagaalka ka socda Tigray.
Hanti-dhowrka Mareykanka ayaa ku eedeeyay ciidammada ka amar qaata General Filipos Woldeyohannes oo ah Taliyaha Ciidanka Difaaca Eritrea (EDF) inay geysteen xasuuq dhac iyo xadgudubyo galmo.
“Cunaqabatayntaas awgeed, dhammaan hantida uu leeyahay Gen Woldeyohannes waa la xannibayaa, ganacsi kasta oo ay ku leeyihiin Mareykankana waa mamnuuc.”ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay Hantidhowraha Maraykanka.
Bayaan uu soo saaray agaasimaha xafiiska xakamaynta hantida shisheeye Andrea Gacki, ayaa ugu baaqay Eritrea inay ciidamadeeda kala baxdo Itoobiya, wuxuuna ku boorriyay dhammaan dadka ku lugta leh colaadda inay bilaabaan wadahadallo nabadeed.
“Waaxda Maaliyaddu waxay sii wadi doontaa inay tallaabo ka qaaddo kuwa ku lugta leh xadgudubyada halista ah ee ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee adduunka oo dhan, oo ay ku jirto gobolka Tigray ee Itoobiya,” ayay tidhi Andrea Gacki, oo ah agaasimaha Xafiiska Waaxda Hantida Dibadda ee waaxda.
Hase yeeshee Dowlada Eritrea ayaa si carro leh u diiday go’aanka iyo eedeymaha loo soo jeediyay.
“Dowladda Eritrea waxay diidday, warqad ahaan iyo ruux ahaanba, eedeymaha gabi ahaanba aan sal iyo raad -lahayn ee loo soo jeediyay,” ayaa lagu yidhi bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Eritrea.
“Marka la eego eedeymaha soo noqnoqda ee aan loo meel dayin, Eritrea ma aamusin karto. Xaaladaha jira, Eritrea waxay ugu baaqaysaa Maamulka Mareykanka inay kiiska u keenaan garsoore madaxbannaan haddii ay dhab ahaantii hayso xaqiiqo ay ku caddeynayso eedeymaha beenta ah.”ayaa lagu yidhi qoraalka.
Dowlada Eritrea oo saaxib la ah dowlada Itoobiya ayaa lagu eedeeyay inay ciidamo geysey gobolka Tigrey halkaas oo ay gabood falo ka geysteen.
By Wariye October 20, 2021
Todobaadkii hore Warbaahinta Shiinaha, ayaa baahisay War ay ku sheegayso in Dawladda Taiwan jid khaldan u...
(SLT-Torino)-Wiil dhalinyaro oo lagu magacaabo Cabdillaahi Axmed Macalin oo ah Soomaali ayaa loo doortay Golaha deegaanka...
Alle ha u naxariistee, waxa xalay Salaadii Maqrib ku geeriyooday Masaajid ku dhex yaala Huteel Maansoor...
By Wariye October 19, 2021
KULMIYE Oo Magacaabis Sameeyey.
By WariyeOctober 20, 2021
By WariyeOctober 19, 2021